စိတ်ကြိုက်ပုံနှိပ်ထားသောသေးငယ်သည့်ထုပ်ပိုးနိုင်သောလျှောဆပ်ပြာ Kraft စက္ကူအံဆွဲ Box ကို - လက်ကိုင်ပါ
နာမည်: စိတ်ကြိုက်ပုံနှိပ်ထားသောသေးငယ်သည့်ထုပ်ပိုးနိုင်သောလျှောဆပ်ပြာ Kraft စက္ကူအံဆွဲ Box ကို - လက်ကိုင်ပါ
ပစ္စည်း: 300gsm Kraft paper
Sample lead time:5အလုပ်လုပ်ရက်
Mass order time: 18-20 အလုပ်လုပ်ရက်
ထုပ်ပိုး: Each box with one OPP bag, several pieces into7layer carton, inside all coverd with foam
Others: We make boxes, paper bags, ဖဲကြိုး, card. All can be customized here
We promise that for each sampling, lead time will be controlled in7အလုပ်လုပ်ရက်.
for more than5နှစ်ပေါင်း. With this advantage, surely we can save your budget.
မြောက်အမေရိကမှကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကစျေးကွက်, အနောက်ဥရောပ, တောင်အမေရိက, အရှေ့ဥရောပ, အာရှ, ပြည်တွင်း.
အဖွဲ့လိုက်, ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု, ကောင်းသောဆက်သွယ်ရေးနှင့်ဖန်တီးမှုဆန်းသစ်တီထွင်မှု၏ကုမ္ပဏီယဉ်ကျေးမှု.
3.Our product has been exported to more than 100 countries and areas. Such as Middle Asia, တောင်အမေရိက, EU, Japan and so on.
Machines ထက်ပိုပြီး 38 machines, mainly imported from Germany. Japan and US.
ထုတ်ကုန်များ printing on all material, all kind of displays, for your indoor/outdoor advertising, promotion and exhibition packaging products
1. We will keep you in contact in 24 နာရီ, and we will also keep in touch for further questions.
1) ထုပ်ပိုး: 5000 pcs, even 10000 pcs small bags in 1 carton or as clients’ sizes requested
2) Shipment: by sea about 18-28 days or by express (DHL, ယူပီအက်စ်, FEDEX) and air about 3-4days
3) ငွေပေးချေမှု: T/T and western union, ပိုက်ဆံဂရမ်
ဟုတ်တယ်. We have been in providing professional solutions in printing and packaging industry over 10 နှစ်ပေါင်း.
ဟုတ်တယ်, သို့သော်, in most cases, we work on OEM orders. That means your own products can be customized as long as you give us the production information in details.
- ဖြစ်နိုင်လျှင်, please also provide pictures or design sketch for checking.
-The commonly used ones: PDF, CDR, အာအိုင်, PSD.
-Bleed size: 3-5မီလီမီတာ.
6. နမူနာဘယ်လောက်ရက်ပေါင်းပြီးစီးလိမ့်မည်? How about the mass production?
-ယေဘူယျအားဖြင့်, 2-3 နမူနာအောင်ဘို့ရက်ပေါင်း
-The lead time of folding kraft box will depend on quantity, ထုတ်လုပ်မှုအနုပညာ, စသည်တို့.
-ဟုတ်တယ်. We can send FREE stock sample to you ; custom sample is Not FREE.
-By couriers, TNT, DHL, FEDEX, ယူပီအက်စ်, စသည်တို့.
အမှတ်အသားများ (Tags)：အံဆွဲစက္ကူသေတ္တာ, စက္ကူဘူး
လက်လီအရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ထားသောအသေးစား Kraft ကတ်ထူပြားလေးသည် ၀ င်းဒိုးပါ ၀ င်သည့်စက္ကူအံဆွဲသေတ္တာကိုဖွင့်သည့်အိတ်ဖွင့်သောကွတ်ကီးကွတ်စ်ထ်ထလက္
Custom Creative Gift Paper Socks သည်ထုပ်ပိုးခြင်းသေတ္တာနှင့်အတူ
350g မိုဘိုင်းဖုန်းအိတ်ဆောင်သေတ္တာကို Kraft Paper Drawer ထုပ်ပိုး
လက္ကားစျေးပေါသောကြော့အဖြူခေါက်နိုင်သောအဖုံးအုပ်ထားသောစက္ကူအဖုံးနှင့် Base Box
PVC Window ပါ ၀ င်သောအဖြူရောင်ပြန်လည်အသုံးပြုပုံနှိပ်ခြင်းစက္ကူထုပ်ပိုးခြင်း Box ကို
လူကြိုက်များသောဒီဇိုင်းအမှတ်တံဆိပ်ပုံနှိပ်ထားသော Iridescence Sliding Foldable Holographic Foil လျှောအံဆွဲသေတ္တာ